14 | January | 2018 | |
เพียร์สันพูดถึงกวินทร์ : ‘ผมเข้าใจแรงกดดันที่เขาต้องเจอ’
Posted By:	Times of News January 14, 2018 0
ไนเจล เพียร์สัน อดีตกุนซือ เลสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งตอนนี้เป็นนายใหญ่ของ โอเอช ลูเวิน พูดถึงนายด่านคนใหม่ดีกรีทีมชาติไทยอย่าง กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ ที่ได้เดินทางมาถึงสโมสรเป็นวันแรก โดยมือกาวช้างศึกวัย 27 ปี เข้าสู่ชายคาของต้นสังกัดใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และได้ไปยังสนามซ้อมของสโมสร ซึ่งที่นั่น เขาได้พบปะกับ ไนเจล เพียร์สัน อดีตบิ๊กบอส “จิ้งจอกสยาม” ที่ตอนนี้เป็นผู้จัดการทีม โอเอช ลูเวิน อยู่ ซึ่งโค้ชวัย 57 กะรัตกล่าวว่า “ผมแนะนำให้ กวินทร์ ตั้งใจทำผลงานในการซ้อมให้ดีที่สุด และเมื่อโอกาสมาถึงจะต้องเต็มที่กับโอกาสที่ได้รับ” “ผมเข้าใจดีว่าตัวเขาจะต้องเจอแรงกดดันมากมายจากการที่เจ้าของสโมสรเป็นคนไทยเหมือนกัน รวมถึงความคาดหวังจากแฟนบอลที่ประเทศไทย และการยอมรับของแฟนๆ ที่เบลเยี่ยม ผมจึงอยากให้เขาสนใจแต่เรื่องในสนามเท่านั้น และอย่าลืมว่าต้องสนุกกับการเล่นฟุตบอลเหมือนที่ผ่านๆมา” “แต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าโอกาสของกวินทร์จะมาถึงในไม่ช้าแน่นอน” เพียร์สันทิ้งท้าย Article source: http://www.foxsportsasia.com/fox-sports-ไทย/ฟุตบอล/ข่าวล่าสุด/777870/เพียร์สันพูดถึงกวินทร์/
ကီတာကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ အရှိန် မြှင့်လာခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ်
လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ အသင်းနဲ့ အကြိုသဘောတူညီမှု ရရှိထားခဲ့တဲ့ လဇ်ပစ် ကွင်းလယ်ကစားသမား ကီတာကိုခေါ်ယူရန် အရှိန်မြှင့်လာခဲ့ပါတယ်။ လဇ်ပစ် အသင်းကလည်း ကီတာကို လာမယ့်နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့မှ အသင်းကနေ ထွက်ခွာခွင့် ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကီတာဟာ လီဗာပူးလ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တည်းက သဘောတူညီ ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကော်တင်ညို အသင်းကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ ချိန် မှာတော့ ကီတာကို ယခုဇန်န၀ါရီမှာ ခေါ်ယူသွားဖို့ လီဗာပူးလ် ပြင်ဆင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လဇ်ပစ်အသင်းအနေနဲ့ အသင်းကနေ ကီတာကို တစ်နှစ်ကြာမှ ထွက်ခွာခွင့် ပြုမယ်လို့ လီဗာပူးလ်အသင်း ကီတာရဲ့ စာချုပ်လျော်ကြေးကို မတိုးခင်အချိန် တည်းကပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။ […]
H&M facesafeverishness in South Africa over extremist hoodie
Live Match: India vs South Africa 2nd exam 2018,Ind vs rsa 2nd exam 2017,score,live score,highlights published: 13 Jan 2018 views: 28 Live Match: India vs South Africa 2nd exam 2018,Ind vs rsa 2nd exam 2017,score,live score,highlights Match:RSA vs Ind, 2nd Test, India debate of South […]
Koln acquire thespian last-gasp win
Article source: http://www.foxsportsasia.com/football/bundesliga/777851/koln-earn-dramatic-last-gasp-win/
Sanchez destiny to be motionless within 48 hours
Alexis Sanchez’s destiny will be motionless “inasubsequent 48 hours” afteraArsenal striker was left out ofaGunners patrol for Sunday’s better during Bournemouth. Manchester United and Manchester City have both been chasing Sanchez, witha29-year-old out-of-contract subsequent summer and not […]
President in Indonesia published: 09 Nov 2017 views: 1808 [Anchor Lead] President Moon Jae-in over for an eight-day Southeast Asia debate on Wednesday afternoon only after U.S. President Donald Trump’s depart from Korea. On Thursday, President Moon will have limit talks with Indonesian President Joko […]
ASEAN Chair: Singapore Will Do Its Best To Take The Group Foward
Singapore Vacation Travel Guide | Expedia published: 16 Jun 2013 views: 1697086 https://www.expedia.com/Singapore.d180027.Destination-Travel-Guides Small and heavily populated, Singapore is an easy place to explore; zero inacity is some-more than an hour fromabusiness district. Thanks to complicated construction and superb architecture, Singapore […]
Seru, Liverpool akhiri rekor tak terkalahkan Manchester City
Rekor tak terkalahkan Manchester City dalam 30 pertandingan Liga Primer Inggris akhirnya terhenti di markas Liverpool, Minggu (14/1) malam waktu setempat. Liverpool mengakhiri pertandingan dengan skor 4-3. Pertandingan berjalan menegangkan hingga menit terakhir. Sebabnya, City mampu mencetak dua gol balasan pada pengujung pertandingan. Alex Oxlade-Chamberlain […]
Liverpool inflict initial detriment on Manchester City
Manchester City tastedaPremier League better forainitial time this deteriorate after Liverpool triumphed 4-3 in an Anfield thriller. Ox findsabottom corner Sane pulls City level Firmino and Mane strike in discerning succession Salah catches out Ederson Bernardo Silva and Gundogan […]
အသင်းသားတွေကို ပြစ်တင်ပြောကြားခဲ့တဲ့ ဆမ်အလာဒိုက်စ်
အဲဗာတန်အသင်းရဲ့ နည်းပြ ဆမ်အလာဒိုက်စ်က နောက်ဆုံးယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယား လိဂ်ပွဲစဉ်မှာ တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါးစ် အသင်းကို (၄)ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်အပြီး သူ့ရဲ့ ကစားသမားတွေကို ပြစ်တင်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲစဉ်မှာ ပွဲကစားချိန် (၂၆)မိနစ်မှာပဲ ဟောင်မင်ဆွန်က စပါးစ်အသင်းအတွက် ဦးဆောင် ဂိုး သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ဟာရီကိန်းက သွင်းဂိုး (၂)ဂိုး သွင်းယူ ပေးခဲ့ပြီး ပွဲကစားချိန်(၈၁)မိနစ်မှာ အာရစ်ဆင်က စတုတ္ထ ဂိုးသွင်းယူပြီး (၄)ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင် ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဗာတန်အသင်းရဲ့နည်းပြ ဆမ်အလာဒိုက်စ်ကပြောကြားရာမှာ – “ ဒုတိယဂိုးခွင့်ပြုလုိုက်ရတာ က ကျွန်တော်တို့ကို သတ်ခဲ့သလိုပါပဲ။ […]